Shiinaha Customized Crystal pear button-saareyaasha, shirkado cusub, warshad - Xigasho - MIMO FLOW CONTROL
Hoyga > Badhan > Badhanka luul > Badhanka badarka Crystal pear
Badhanka luulka Crystal wuxuu ka samaysan yahay luul ku dayasho iyo nidaamka dhalada dheeman ee la isku qurxiyo, badiyaa waxaa loo isticmaalaa jaakad moodada oo heer sare ah, biinanka ama kabaha haweenka ee heerka sare ah si ay u jilaan doorka.
1. HordhacaBadhanka pear Crystal:
2. Xuduudaha alaabta eeBadhanka badarka Crystal pear:
Badhannada 'Crystal Pearl Button' oo ay kujiraan xoqida dharka
Crystal, ABS caag ah, galaas ama qolof
500pcs / cabir / midab
La mid ah sawirka, oo dalban kara midab la habeeyay
Boorsooyinka / Dharka Arooska / Dharka / Dharka Dharka / Dharka Dharka
Cabirka la heli karo:
Aqbal naqshadaha gaarka ah iyo sumadda sumadda
Bacda OPP ama sida ku xusan shuruudaha macaamiisha
3. Faa'iidooyinka badhanka luul luul
Shaqo wanaagsan, jawi heer sare ah, shaqo aad u adag.
4. Tilmaamaha isticmaalka sheygaBadhanka badarka Crystal pear:
Badhanka isku-darka luul-kristelku waa kan ugu horreeya dharka daba-dheer ee daba-dheeraada
Badhanka darajada sare ayaa badanaa ka muuqda sheykiisu waa darajo sare, qaabeynta waa qurux badan, midabku waa qurux badan yahay, cimri dhererkeedu waa wanaagsan yahay, dhinacyadaani waa xaaladaha lagama maarmaanka u ah badhanka isku dhafka badhanka luul luul.
1. Sidee loo sameeyaa naqshad qaabeed?
Fadlan noo soo dir nashqadahaaga nooc kasta oo qaabab ah sidaJpg, AI, CDR, PDF iwm Oo cadeyn cad u yeelo naqshadda aad rabto, qiyaasta, midabka, iyo tirada. Waxaan sameyn karnaa shaybaarro bilaash ah si laguu oggolaado.
2. Sidee loo dalbadaa?
Marka muunada la ansixiyo, fadlan noo soo dir PO-gaaga emailka. Kadib waxaan kuu soo diri doonaa qaansheegta si loo xaqiijiyo amarrada.
3. Noocee lacag bixin ah ayaa la aqbali karaa?
Waxaan bilaabi doonaa wax soo saarka mar bixinta buuxda la sameeyo. PayPal, TT iyo West Union waa la aqbalay.
4. Muddo intee le'eg ayuu sheegaa?
Waqtigayaga hogaamintu waa qiyaastii 5-7 maalmood kadib helitaanka lacagta buuxda. Laakiin amarrada badan ayaa laga yaabaa inay wax yar sii dheeraadaan. Alaabada waxaa geeya Door-to-Door Express (UPS, DHL, EMS, FedEx, and TNT) ..
5. Goorma ayaad heli kartaa qiimaha?
Waxaan badiyaa sheegnaa 24 saac gudahood ka dib markaan helno baaritaankaaga. Haddii aad aad ugu baahan tahay helitaanka qiimaha, fadlan na soo wac ama noo sheeg e-maylkaaga si aan u tixgelinno mudnaanta baaritaankaaga.
Batoonka pear ABS